उच्च गुणस्तर एसईओ सेवा प्रदायकको आवश्यक तत्वहरू के हो?
समकालीन विश्वमा जहाँ स्टोरहरू स्टोर र ट्याब्लेटहरू, वा मोबाईलको फोनहरू प्रतिस्थापन सहायकहरू प्रतिस्थापन गर्दछ, हामीलाई राजस्व प्राप्त गर्न हाम्रो व्यवसायलाई अनलाइन स्थापित गर्न आवश्यक छ।. एक चीज जो निवेश को आवश्यकता हो वेबसाइट विकास हो. अर्को कम महत्वपूर्ण पहलू वेबसाइट पदोन्नति हो. तपाइँ एक आकर्षक र गुणस्तर साइट बनाउन सक्नुहुन्छ जुन तपाईंको सम्भावित ग्राहकहरूमा देखिने छैन. यो वेबसाईट मालिकहरु को लागि एक सामान्य स्थिति र मुख्य एसईओ सेवा प्रदायकहरु को लागी किन खोज्नुको मुख्य कारण हो. त्यहाँ धेरै उपलब्ध विकल्पहरू छन् जुन तपाईं आफ्नो साइट - वेतन प्रति क्लिक विज्ञापन, ब्लग पोस्टिंग, सोशल मिडिया मार्केटिंग र कसरी प्रचार गर्न सक्नुहुन्छ. तथापि, खोज इन्जिनमा तपाईंको साइटलाई दृश्यात्मक बनाउने सबैभन्दा शक्तिशाली तरिका खोजी इन्जिन अनुकूलन हो. तपाईले तपाइँको साइटलाई धेरै तरिकामा अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ - उच्च गुणस्तर एसईओ सेवा प्रदाता भर्ती गरेर वा तपाइँको एसईओ घर बनाएर. यस प्रकारको दुवैको उनीहरूको प्रविधि र सहमति छ. तथापि, अन्तिम एक जोखिमजनक छ किनकि यसले तपाईंको रैंकिंग र वेबसाइट प्रतिष्ठा खर्च गर्न सक्दछ. ज्ञान र अनुभवको कमीको कारण, तपाइँ आफ्नो साइटको स्थितिमा चोट लगाउन सक्दछ र खोज इन्जिनहरूबाट दण्ड पनि पाउन सक्नुहुनेछ. यसैले एक विश्वसनीय SEO सेवा प्रदायक भर्ती गर्ने विषय आजकल प्रचलित छ. यस छोटो लेखमा, म तपाईंलाई केही सुझाव दिनेछु कि एक राम्रो अनुकूलन कम्पनी कसरी खोज्नको लागि तपाईको साइटको लागि उत्तम SEO सेवाहरू प्राप्त गर्न.
प्रश्नहरु तपाईंलाई एसईओ सेवा प्रदाता लाई सोध्नु पर्दछ
म एक सूची बनाउन को लागी तपाईंलाई शीर्ष प्रश्नहरु लाई पूछना एसईओ सलाहकारहरु लाई उनको योग्यता र विश्वसनीयता प्लस केहि प्रश्नहरू उनीहरूले पनि तपाईंलाई सोध्नु पर्छ.
के तपाइँ मेरो वेबसाइटमा टेक्नोलोजी भागमा कुनै टिप्पणी छ?
एक राम्रो एसईओ सेवा प्रदाताले तपाईको साइट कोड को एक विस्तृत विश्लेषण गर्न को लागी कुनै त्रुटिहरु को खोज गर्न को लागी तपाईंको साइट को Google TOP बाट रोक्न सक्छ।.
मेरो साइटमा कस्तो परिवर्तन हुनेछ र मलाई किन चाहिन्छ?
तपाईलाई तपाईको साइट रेटिङ्मा सुधार गर्न आवश्यक कुन कुन र बन्द-पृष्ठ परिवर्तनहरूमा छलफल गर्न आवश्यक छ।. यसबाहेक, एसईओ विशेषज्ञहरूले तपाइँलाई वर्णन गर्नुपर्दछ किन तपाईलाई यो परिवर्तनको आवश्यकता छ र उनीहरुले कसरी हालको वेबसाइट परिस्थिति परिवर्तन गर्न सक्दछन्. सामान्यतया, पृष्ठमा अनुकूलनलाई लक्षित साइट सर्तहरूको सूक्ष्म समावेश प्रत्येक साइट पृष्ठमा उपयुक्त स्थानहरूमा आवश्यक पर्दछ. अफ-पृष्ठ अप्टिमाइजेसन, यस अवधिमा, खोजी इन्जिनको आँखामा तपाईंको वेबसाइट प्राधिकरणलाई सुधार गर्न कार्य गर्दछ. यस प्रक्रियाको समयमा, एसईओ विशेषज्ञहरूले गैर-गुणस्तर लिङ्कहरू हटाउन आवश्यक छ र तपाईंको साइट मेटाडाटालाई सुधार गर्न आवश्यक छ जस्तै शीर्षक ट्यागहरू र मेटा विवरणहरू।.
तपाई वेबसाइटमा लिङ्क कसरी लिनुहुन्छ?
एसईओ सेवा प्रदाता संग काम शुरू गर्नु भन्दा पहिले तपाईले लिङ्क को मात्रा र गुणवत्ता को जाँच गर्न को लागी यो एजेंसी तपाईंलाई प्रदान गर्न सक्छ. व्यावसायिक एसईओ कम्पनीहरु को स्रोतहरु को संख्या छ जहाँ उनि आफ्नो ग्राहकहरु को लिंक को उपयोग गर्न सक्छन्. यी स्रोतहरू एक विशेष क्लाइन्टको वेबसाइटको प्राधिकृत र प्रासंगिक हुनुपर्दछ. तिनीहरूसँग एक फरक लिङ्क प्रोफाइल हुनु पर्छ जसमा प्रमुख डोमेनहरूमा तपाईंको व्यवसाय सम्बन्धी संलग्न सामग्रीहरू, प्रासंगिक इन्टरनेट प्लेटफार्महरू, निःशुल्क र भुक्तान गरिएका अनलाइन डाइरेक्टरीहरू, स्थानीय साइटहरूमा अतिथि पोष्टहरू र यसका बारेमा सम्बन्धित प्रकाशनहरू प्रकाशन गर्नुपर्छ।. निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको एसईओ सेवा प्रदायकले कालो टोपी लिङ्क निर्माण विधिहरू जस्तै व्यवहार गर्दैन जस्तै तपाईंको अज्ञानताको रूपमा लिङ्क खरिदले तपाईको SERP मा तपाइँको स्थिति खर्च गर्न सक्दछ। Source .